Kunyorwa kweBumbiro Idzva Kotanga neZvipingaidzo
Chikumi 24, 2010
Zvinhu zvinonzi hazvisi kufamba zvakanaka munzvimbo dzakawanda muhurongwa hwekunyorwa kwebumbiro idzva remitemo yenyika, uhwo hwapinda muzuva repiri.
KuMarondera, zvinonzi vari kufanirwa kunge vachitora mifananidzo vari kuramba kushanda vachida kuti mari dzavakavimbiswa dzikwidzwe kubva pa$25.00 kusvika pa$100.00.
KuMudzi, Mashonaland East, vakarwira hondo yerusununguko vanonzi vari kurambidza vemachechi kupinda muhurongwa uhu. KuMutare North, nekuManicaland, vakarwa hondo nevatsigiri veZanu PF vanonzi vari kurambidza vatsigiri veMDC kupinda misangano yekupa pfungwa dzavo.
Zvinonzi vari kutungamira hurongwa uhu vari kutadza kugadzirisa matambudziko avari kusangana nawo. PaMount Zonwe, kwakare kuMutare North, vanhu vanonzi vanga vachimanikidzwa kuita zvekuvhota pamibvunzo yanga ichibvunzwa nevari kutungamira hurongwa uhu.
KuChimanimani West, vanhu vanonzi vanga vachimanikidzwa nevakarwira hondo yerusununguko kusarenda makadhi avo emapato ezvematongerwo enyika, vasati vapinda mumisangano yaitwa.
KuChinhoyi, kuMashonaland West, vaimbova varwiri vehondo yerusununguko vanonzi vatadzisa musangano wekunzwa pfungwa dzevanhu uyu mushure mekutandanisa zvikwata zviri kutungamira hurongwa uhu.
Amai Tadziripa Khumalo vari kuongorora hurongwa uhu vakazvimirira voga kuManicaland. Amai Khumalo vanoti rimwe dambudziko guru ravaona riri pakuturikirwa kuri kuitwa mashoko, ayo akanyorwa neChirungu, kuruzhinji rwevanhu.
Mumwe wemasachigaro ekomiti iri kutungamira chirongwa ichi, VaDouglas Mwonzora, vaudza Patience Rusere weStudio7 kuti zvinhu zvafamba zvakanaka kuManicaland neMashonaland Central, kunyange hazvo kusingazoshaikwi twuzhowe-zhowe mune dzimwe nzvimbo.